I would like to get this file — MYSTERY ZILLION
I would like to get this file
September 2009 edited September 2009 in File Request
Can you help me? I would like to get all these file..But It is very difficult for me to download with rapidshare....Can you upload at other site suitable with Myanmar..?
Really Thanks if you help me
puja wrote: »
ကိုပူဂျာ အက်တစ်လိုမျိုးအခွေဆိုင် မှာ တွားဝယ်လို့ရဝူးလားဟင်.... ဆွဲတာကတော့ အစဉ်ပြေပါတယ်ဗျာ.... ပြန်တင်ပေးဖို့ကျ အဲ့လောက်ဆိုဒ်ကြီး :d:d:d နဲနဲအခက်အခဲရှိလို့ပါဂျာ.. 99မက် 13 ခုကြီး ပြန်တင်ဖို့အတါက် ထပ်ပိုင်းရပါလိမ့်မယ် အနည်းဆုံး ၂ဆလောက်ဖြစ်တွားမယ် 26 ပိုင်းပေါ့ ဒါတောင်ကွန်တော်တော်ကောင်းမှ အစဉ်ပြေမှာ :d:d:d
Oh!!...sorry my friend...I didn't consider your side....However..Thanks for reply....IT is Ok..No problem...I will try as you advice...
part တစ်ပိုင်းစီဟာ 103 MB လောက်စီရှိပါတယ်.. အဲဒါမျိုး .. 13 ဆိုတော့ စဉ်းစားသာကြည့်တော့ .. (နောက်ဆုံး part 13 က တော့ 21 MB လောက်ဘဲရှိပါတယ်)ပျဉ်းမျှအားဖြင့် 1.2 GB ကျော်ပါတယ် .. လိုင်းကိုယ်ပိုင် မဟုတ် ဘဲ ဆိုင်က သုံးတဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုရင် ဒီဆိုဒ်ကို ဆွဲနိုင်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ... 1 ပိုင်းကို ဆွဲဖိုးတောင် ဆိုင်မှာဆိုရင် 1-2နာရီ နီးပါးလောက် ကြာနိုင်တယ် .. ဒါတောင် တော်တော်ကောင်းတဲ့ဆိုင်ဖြစ်မှ .. လိုင်းကိုယ်ပိုင်သုံးတဲ့သူဆိုရင်လည်း ..ဒီလောက်ကြီးဆွဲလို့ ကြာမယ့်အချိန်ကို 1000 KS လောက်နဲ့ နှှိုင်းယှဉ်ထည့်တွက်သင့်ပါတယ် .. ဖြစ်နိုင်ရင် .. ဆိုင်ကနေ ၀ယ်လိုက်တာ ကောင်းပါတယ်.. နောက်ပြီး တကယ်လို့ resume corrupt ဖြစ်ရင် ဒီထက်လည်းပိုပြီး ကြာသွားနိုင်ပါတယ်..MS windows7ကိုတောင် တစ်ခြား share site တွေက မတင်ပေးထားပါဘူး .. link တွေပေးရင်း ပေးရင်းနဲ့ နောက်ဆုံး microsoft site ထဲကိုဘဲပြန်ရောက်သွားပါတယ်.. (ဒါက တစ်ခြား copyright law အရရှိချင်လည်းရှိမှာပေါ့လေ) ဆွဲတဲ့သူဖက်က ဆွဲပေးနိုင်ပေမဲ့ တစ်ခြား hosting တစ်ခုကို ပြောင်းတင်တဲ့အချိန်ကျရင် မြန်မာပြည်ရဲ့ connection နဲ့ဆိုရင် အလွန်မှကို စွန်စားမှုတစ်ခု ပြုရသလိုပါဘဲ...(တစ်ခြား permission ကိစ္စတွေလည်းရှိပါသေးတယ်) အဲဒါကြောင့် .. တောင်းတဲ့သူများကလည်း တစ်ဖက်ကိုနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ပြီးမှ တောင်းစေချင်ပါတယ်... နောက်လဲ အခုလို့ဘဲအားပေးကြပါဦးလို့:D:Dကျေးဇူးတင်ပါတယ်..